Manchester City oo u gudubtay wareega SIDEED DHAMMAADKA FA Cup, kadib markii ay ka adkaatay Newport County + SAWIRO – Gool FM
(Fa Cup) 16 Feb 2019 Kooxda Man city ayaa guul muhiim ah ka gaartay Newport County kulan ka tirsan wareega shanaad ee tartanka Fa Cup .
Kooxda difaacaneysa horyaalka Premier league ayaa ku guul dareesatay in qeebtii koowaad ee ciyaarta ay dhaliso wax gool ah , sidookale Newport County ayaa dhankeeda wax gool dhalin qeebtii koowaad ee ciyaarta .
Qeebtii koowaad ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay bareejo 0-0 , balse qeetii dambe ee ciyaarata Kooxda Man City waxaa u suura gashay in ay la yimaadaan afar gool .
Goolka koowaad waxaa daqiiqadii 51-ee ciyaarta dhaliyey laacibka xawaaraha badan ee Sane waxaana caawinteeda lahaa laacibka reer Barazil ee Jesus.
Daqiiqadii 75-aad waxaa yimid goolkii labaad ee ciyaarta waxaan Manchester City goolkaas u saxiixay da’yarkooda lagu magacaabo Foden.
Kooxda Newport County ayaa la timid gool waxaana u dhaliyey Amond daqiiqadii 88 -aad ee ciyaarta , balse daqiiqado ka dib City ayaa la timid labo gool waxaana dhaliyey Foden oo mar kale shabaqa gaaray iyo Mahrez .
Ugu dambeen ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 4-1oo ay guusha ku raacday kooxda Man city oo todobaadkan gudihiisa ciyaareyso tartanka Champions league .
Ashley Cole oo Caawa qabtay wax uu qaban waayay Sanadihii uu u ciyaarayay Arsenal iyo Chelsea.....+SAWIRRO